News – Page 952 – Puntland Voice
Ciidamada reer Yurub ee ku sugan Badda Soomaaliya oo fashiliyay markab burcad badeedu afduubanlahaayeen
Ciidamada Midowga Yurub ka socda ee ka howlgala badda Soomaaliya ayaa badbaadiyay markab burcad badeeda Soomalaidu afduub rabeen markii ay weerar ku qaadeen. Markabka oo sitay calanka Panama ayaa dirqi ku badbaaday markii ay ka soo gaareen ciidaamada Dalka denmarka […]
Beelihii ku dagaashanaa koonfurta Mudug oo xalay dad badan iska dilay
Gaalkacyo (AB):-Wararka ka imaanaya magaalada gaalkacyo ayaa sheegaya in mar kale xalay uu dagaal dhexmaray labada beelood ee kala dega deegaanada Bacaadweyne iyo Camaara ee koonfurta Gobolka Mudug. khasaaraha ka dhashay dagaaladii xalay dhacay ayaa aad u sii kordhaya marka […]
Wasiiro ka tirsan Dowlada Puntland ayaa maanta kormeer ku gatay Degmada Burawadal ee Gobalka Sool.
Degmada burawadal oo qiyaas ahaan u jirta magaalada garoowe ee caasimada puntland 18km islamrkaana ka tirsan gobalka sool ayaa waxaa maanta booqosho ku tagay wasiiro iyo wasiiro kuxigeeno ka tirsan dowlada puntland gaar ahaan wasiirka wasaaradda waxbarashada puntland Cabdi farax […]
Maxmada Gobolka Bari oo dib ugu yeertay dad hore loogu xukumay dil toogasho ah.
Boosaaso (AB):-Maxkamada Magaalada Boosaaso ku taal ayaa dib u gu yeertay 7 qofood oo hore loogu xukumay dil toogasho ah kuwaasoo uu ku jiro nin Itoobiyaan ah. Dadkaani hore loogu xukumay dilka toogashada ayaan la ogeyn sababta ay hadda dib […]
Bacadwayn(AP):Dagaal beeleedyo u dhexeeya labo beelood oo oo ka socda deegaanka Bacadwayn ee gobalka Mudug.
Wararka naga soo gaaraya deegaanka bacaadwayn ee gobalka mudug ayaa sheegaya in ay ka socdaan dagaalo u dhexeeya labo beelood oo wada degta deegaanka bacaadwayn ee gobalka mudug gaar ahaan koofurta gobalka mudug waxaana ay wararku sheegayaan in inta la […]
Ciidamada Xisbul islaam oo la sheegay inay Maanta Magaalada Afgooye ku dileen Nin qaad wade ahaa
Afgooye (AB):-Wararka laga helayo dadka ku dhaqan magaalada Afgooye ee Gobolka Shabeelaha hoose ayaa sheegaya in halkaasi maanta lagu dilay nin qaad iibiye ka ah magaaladaasi kadib markii uu rasaas ooda uga qaaday askari ka tirsan maamulka Ururka Xisbul islaam […]
Waaliga Gobolka Banaadir ee Xarakada Alshababa oo Maanta saxaafada soo tusay Fariisimo ay shalay Galab ka qabsadeen ciidamada Dowlada iyo Ahlu suna
Muqdisho (AB):-Waaliga Gobolka Banaadir ee Xarakada Alshababa oo Maanta saxaafada soo tusay Fariisimo ay shalay Galab ka qabsadeen ciidamada Dowlada iyo Ahlu suna Waaliga Gobolka Banaadir ee Xarakada Mujaahidiinta Alshabaaba Sheekh Cali Maxamed Xuseen ayaa maanta saxaafada soo tusay fariisimo […]
Meydka Safiirkii Soomaaliya ee Dalka Zanbia oo Musqul laga dhex helay
Lusaka (AB):-Wararka ka imaanaya Magaalada Lusaka ee Dalka Zanbia ayaa sheegaya inuu geeriyooday safiirkii Soomaaliya u fadhiyay dalkaasi Zanbia kadib markii meydkiisa laga helay musqusha hoyga uu ka daganaa gudaha safaarada. Alle ha u naxariistee Safiirkaasi oo lagu magacaabi jirey […]
Wasiir ka tirsan Dowlada Itoobiya oo sheegay inaysan xiligaan qorshaha ugu jirin inay ciidamo u diraan Soomaaliya
Adis ababa (AB):-Brakat Simon wasiirka duulistav Dowlada Itoobiya ayaa daboolka ka qaaday inaaney xiligaan qorshaha ugu jirin wax ciidamo ah oo ay soomalaiya u dirayaan. Wasiirkaasni waxaa uu meesha ka saaray go’aan dowlada xageeda ah oo ay ku faragelinayaan arimaha […]
Madaxweyne Faroole oo canbaareeyay dagaalka Muqdisho ka sii socda.
Muqdisho (AB):-Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland C/raxmaan Sheekh Maxamed Faroole ayaa ka hadlay dagaalada lixda maalin ka sii socda magaalada Muqdisho isagoo canbaareeyay dagaaladaasi. Mr.C/raxmaan Faroole Madaxweynaha Puntland waxaa uu eedeyn dusha uga tuuray xarakada alshabaab isagoo ku tilmaamay inay iyagu […]
« Previous 1 … 950 951 952 953 954 … 1,022 Next »